September 2016 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
9/30/2016 04:10:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १४ गते । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।ती विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँ संशोधन) विधेयक २०७३ रहेका छन् ।
ती विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले समेत सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तर तत्कालीन सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन सकेका थिएन ।
ती विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साह र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भाग लिनुभएको थियो ।
अर्थमन्त्री महराले आर्थिक समृद्धिमा सरकारले जोड दिएको, विलासीमा उपकरणमा उच्च कर लगाइएको, करका दरलाई समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कर चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको, कर प्रणालीमा सुधार भइराखेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक २०७३ असोज १६ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने छ । रासस
मापदण्ड नपुर्‍याउने उद्योगलाई ३० लाखसम्म जरिवाना
9/30/2016 02:12:00 PM आर्थिक
काठमाडौं,असोज १४ गते । सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगर्ने उद्योगहरुलाई कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही हुने भएको छ । संसदबाट पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ मा कसुरको मात्रा हेर्दै उद्योगलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
ऐनमा सरकारी मापदण्ड, ऐन कानुन र गुणस्तही सामान उत्पादन तथा विक्री वितरण गरको अवस्थामा कसुर हेरेर दर्ता/ अनुमति खारेज र उद्योग बन्द सम्मको सजायको गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गल्ती गर्ने उद्योगलाई सरकारले सजाय गर्नुपूर्व सफाई पेश गर्ने मौका दिने र सजायमा चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था समेत औद्योगिक ऐनमा गरिएको छ । उद्योगको गल्ती हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार भने उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
ऐनमा उल्लेख गरिएको दण्ड तथा सजाय उद्योगमैत्री नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सरकारले लामो समयपछि व्यवसायीकै पहलमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन ल्याएको छ’ उनले भने ‘तर, ऐनमा उल्लेख गरिएको दण्ड तथा सजायको व्यवस्था भने बढी भएको छ ।’
ऐनमा कसुर र सजाय वर्गीकरण अनुसार कारबाही हुने भने पनि वर्गीकरण गर्ने आधार र कसले गर्ने भने विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘गल्ती गर्ने उद्योगलाई कारबाही हुनुपर्छ’ उनले भने ‘कारबाहीको नाममा उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने भने विषय उचित हुँदैन ।’
दण्ड सजाय बाहेक ऐनमा व्यवस्था गरिएका दर्ता प्रत्रिया, उद्योग वर्गीकरण, छुट, सहुलियत र सुविधा लयायतका अन्य विषय भने अतिनै राम्रो रहेको उनले बताए ।
ऐनमा सरकारले लघु उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गर्नुपूर्व गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी एनेमा उद्योग दर्ताको प्रक्रियामा डिजिटल हस्ताक्षर र विद्युतीय कारोवारलाई समेत मान्यता दिने भएको छ । साथै ऐनमा एकल विन्दु सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यदि कोही कसैले तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता नगरे मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
ऐनमा उद्योगको वर्गीकरणलाई विस्तृत र व्यवहारमूखी बनाउने र लघु उद्यमलाई पनि वर्गीकरणमा समावेश गरी विशेष महत्व दिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनमा पुरानो व्यवस्था अनुसारको पूँजीको सीमा समेत बढाउने भएको छ ।
के छ छुट ?
ऐनमा मुलुकको अर्थ व्यवस्थाले सक्नेगरी र सैद्धान्तिक रुपले सम्भव भए सम्मका छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरु गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनासंग सम्वन्धित, दुर्गम स्थानमा संचालित, बढि रोजगारी दिने, पेट्रोल ग्यास जस्ता उद्योगहरुलाई विशेष छुट तथा सुविधा दिने समेत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा संचालित उद्योगलाई स्थानीय तहमा लाग्ने कर छुटको समेत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जग्गाको अधिकतम हदवन्दीमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा कुनै खास शिप र क्षमता आवश्यक पर्ने नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेका जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थ्ाा छ ।
उद्योगको संचालन र उत्पादनमा असर पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता काम कारवाही गर्न नपाइने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।-अनलाइनखबर
9/30/2016 01:39:00 PM समाचार
9/30/2016 01:37:00 PM विश्व
मुम्बई – भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो समय देखिएको तनावबीच इन्डियन मोसन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स एसोसिएन (आइएमपीपीए) ले पाकिस्तानी कलाकारहरुलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘आइएमपीपीएको ८७ औं सम्मेलनले चलचित्र निर्माताहरुले कुनै पनि पाकिस्तानी कलाकारहरुलाई अनुबन्ध नगर्ने निर्णय गरेको छ,’ संगठनका अध्यक्ष टिपी अग्रवालले भने ।
भारतीय सेनाले लाइन अफ कन्ट्रोलमा आतंकवादीहरुमाथि कारवाही गरेको खबरसँगै निर्माताहरुले उक्त निर्णय गरेका हुन् ।
संगठनका सदस्य अशोक पण्डितले संगठनले उरी हमलामा ज्यान गुमाएका सदस्यप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको बताउँदै देशप्रति संगठनको पनि जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै पाकिस्तानी कलाकारहरुलाई चलचित्रमा नलिने निर्णय गरेको बताए । उनले स्थिति सामान्य नभएसम्म यो निर्णय लागु हुने बताए । ‘हाम्रो लागि देशनै पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने ।
विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा पार्टीहरुले पाकिस्तानी कलाकारलाई भारतलाई प्रतिबन्ध गर्न र कुनै कार्यक्रममा सहभागी नगराउन माग गरेको थियो ।
गत हप्ता राज ठाकरेको नेतृत्वमा रहेको एमएनसले पाकिस्तानी कलाकारहरुलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै देश छाड्न चेतावनी दिएको थियो ।
यसैबीच पाकिस्तानी गायकहरु सफकत अमानत अली र आतिफ असलमको बैंगलुरु र गुरगाउमा हुने भनिएको कन्सर्ट रद्द भएको छ भने फवाद खान र अलि जाफर पाकिस्तान फर्किएका छन् ।
संघका अध्यक्ष अग्रवालले उनको नयाँ चलचित्रमा राहत फत्ते अलि खानको ठाउँमा अर्को गायकलाई लिएको खबर छ ।- एजेन्सी
9/30/2016 01:07:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १४ गते । सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिका नवनिर्वाचित सभापति मोहनप्रसाद बराललाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।
सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा आज आयोजित समारोहमा नवनिर्वाचित सभापति बरालले शपथ लिनुभएको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक सीता नेपाली प्रस्तावक र नेकपा (एमाले)का काशीनाथ अधिकारीको समर्थनमा उम्मेदवारी दिनुभएका उहाँ बिहीबार निर्विरोध सभापति पदमा चयन हुनुभएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सिन्धुली क्षेत्र नं २ बाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सभापति बराल यसअघि अर्थसमितिको सदस्य हुनुहु्न्थ्यो ।
सिन्धुलीको रानीवास स्थायी घर भएका बरालले २०३९ सालबाट राजनीति यात्रा आरम्भ गर्नुभएको थियो । उहाँले लामो समयसम्म प्राध्यापन गर्नुभएको थियो ।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय हुँदा पटक पटक गरी उहाँले एक वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएको छ ।
यसअघि उक्त समितिको सभापतिको जिम्मेवारी गगनकुमार थापाले वर्तमान मन्त्रीपरिषदमा स्वास्थ्य मन्त्रीभएसगै सभापति पद रिक्त भएको थियो ।
नव निर्वाचित सभापति वरालले आजै सिहदरवारस्थित समितिको सचिवालयमा आफनो पदभार सम्हाल्नुभएको छ ।रासस
व्यवस्थापिका–संसद् शून्य समय...
9/30/2016 01:06:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १४ गते । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले कञ्चनपुर जिल्लामा हात्ती आतङ्क फैलिएकाले नियन्त्रण गर्न र भूकम्पपीडित जनतालाई अनुदानको रकम पु¥याउन सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
दार्जुला जिल्लामा विसं २०७० र यस वर्ष गएको बाढी पहिरोपीडित जनतालाई राहत दिन, संविधान कार्यान्वयन गर्न र रेमिट्यान्सबारेमा नयाँ कानुन बनाउन पनि उहाँहरुले सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
उहाँहरुले हालै धादिङ, काभ्रे जिल्लामा भएका सडक दुर्घटनामा परेर अकालमा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन, उपत्यकाभित्र सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न, बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु गर्न तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग समयभित्र सम्पन्न गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले विधिको शासन स्थापना गर्न, दसैँ तथा तिहारजस्ता चाडवाड मानाउन घर जानेलाई सरकारले यातायताको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।
यसरी आफ्नो धारणा राख्ने सांसदहरुमा कृपाराम राना, कृष्णप्रसाद पौडेल, गणेशकुमार पहाडी, गणेशसिंह ठकुन्ना, गीता क्षेत्री, गुरुप्रसाद बुर्लाकाटी, चन्द्र महर्जन, चम्पादेवी खड्का, तप्तबहादुर विष्ट तथा तारादेवी राई हुनुहुन्थ्यो । रासस
9/30/2016 01:05:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १४ गते । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चनाखो भई कलम चलाउन पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्वको शुभअवसरमा आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रममा उहाँले मुलुक सङ्गीन घडीमा उभिएको बताउँदै लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने तत्व सक्रिय षड्यन्त्रमा लागेको बताउनुभयो ।
“संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन र निर्वाचन बिथोल्न लाग्नेविरुद्ध गोलबद्ध भई सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गरी जनतालाई जानकारी दिन आम पत्रकार वर्गमा अनुरोध गर्छु”–वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्ने उपाय राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“लोकतन्त्रविरुद्ध मैले ठूलो षड्यन्त्र देखेको छु । तपाईंले कलम तिखो बनाई सोच्नुहोस्, चिन्तन, अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य खोजी गर्नुहोस्” पत्रकारलाई लक्षित गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो ।
विभिन्न समाचार माध्यममा कार्यरत तथा स्वतन्त्र एवम् वरिष्ठ पत्रकारहरुको भेलामा उपस्थित थियो । रासस
राती राम्रोसँग निन्द्रा लाग्दैन, कतै स्मार्टफोनको लत त लागेन ?
9/30/2016 01:04:00 PM स्वास्थ्य
लगभग आधाभन्दा बढि वयस्कले सोसल मिडियामा अपडेट हुन वा व्यक्तिगत इमेल चेक गर्न मध्यरातमा स्मार्टफोनको प्रयोग गर्दछन् जसले उनीहरुको मिठो निन्द्रा खोसिरहेको बेलायतको एक अध्ययनले बताएको छ ।
यूके मोबाइल कन्जुमर सर्भे सन् २०१६का अनुसार बेलायती नागरिकहले एक दिनमा लाखौं पटक आफ्नो स्मार्टफोन हेर्ने गर्दछन् ।
राती स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेमा वयस्कहरु बढि छन्, उक्त अध्ययनले बताएको छ । १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका आधाभन्दा बढि उमेर समूहले मध्यरातमा आफ्नो स्मार्टफोन हेर्ने गर्दछन् । पाँचजना मध्ये एकजना वयस्कले आफ्नो मेसेज र सोसल मिडियाको नोटिफिकेसन मध्यरातमा चेक गर्ने गर्दछन् । सातजनामध्ये एकले मेसेजको उत्तर मध्यरातमा नै दिने गरेको अनुन्धानले बताएको छ ।
‘स्मार्टफोन व्यक्तिगत हुन्छ तर यसको प्रयोगले उनीहरुको वरिपरिको वातावरणलाई असर पुर्याइरहेको हुन्छ । प्रविधिको विकाससँगै उपभोक्ताहरुले स्मार्टफोनसँगै आफ्नो जीवन कसरी व्यतीत गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ । प्रविधिले जीवनलाई प्रभावित पार्न दिनुहुन्न,’ अनुसन्धानकर्ताले बताए ।
१० मध्ये १ जनाले उठ्ने बित्तिकै आफ्नो स्मार्टफोन खोज्दछ । तीनजना मध्ये एकजनाले उठेको पाँच मिनेटमा आफ्नो फोन खोज्छ, मल्टिनेशनल प्रोफेसनल सर्भिस फर्म डेलोइटले बतायो ।- हिन्दुस्तान टाइम्स
‘दशैंका लागि हवाइजहाजको टिकट सकियो’
9/30/2016 12:46:00 PM आर्थिक
चाडपर्व र पर्यटनको सिजनका कारण विमान अभाव
दशैंका लागि आफ्नो सीट सुरक्षित गर्न यात्रुहरुले अग्रिम बुकिङ गरेपछि हवाइ टिकट सकिएको छ । अब कसैले बुकिङ क्यान्सिल गरेमात्रै टिकट पाइने वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।
सुगम ठाउँका लागि आगामी सातादेखि दशैंको टीकाको अघिल्लो दिनसम्मका लागि काठमाडौं बाहिर जाने टिकट अगि्रम बुकिङबाटै प्याक भइसकेको नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘सुगम ठाउँका लागि अब टिकट पाउन कसैले बुक गरेको टिकट क्यान्सिल गरे भने मात्रै सम्भव छ,’ घिमिरेले भने, ‘दुर्गमका लागि भने आगामी सातादेखि मात्रै टिकट खुल्ला हुनेछ ।’
सरकारी जहाजको मात्रै हैन, निजी जहाजको टिकट पनि उस्तै प्याक भएको छ । सुगममा सबैभन्दा धेरै उडान भर्दै आएको बुद्ध एयरको जहाजका पनि टिकटहरु बुक भइसकेका छन् । ‘कसैले बुकिङ गरेको टिकट क्यान्सिल गरे भने मात्रै टिकट दिन सक्छौं,’ बुद्ध एयरका बजार प्रबन्धक रुपेश जोशीले भने ।
बुद्धले मुलुकका मुख्य शहरहरु पोखरा, बिराटनगर, भैरवहा, नेपालगञ्ज, भद्रपुर, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, धनगढी र तुम्लिङटारमा उडान भर्दै दैनिक २२ वटाभन्दा बढी उडान भर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, दशैंको टीकाभन्दा अघि काठमाडौंबाट बाहिर जाने टिकट प्याक भइसकेको यति एयरलाइन्सका रेजुलेसन इञ्चार्ज राजश्री जोशीले जानकारी दिइन् ।
‘अब दशैंको टीकाअघि टिकट उपलब्ध गराउन सक्दैनौं, बुकिङबाट नै प्याक भइसकेका छन्,’ जोशीले भनिन् । पोखरा, बिराटनगर भद्रपुर, भरतपुर, भैरहवा, नेपागञ्ज, जनकपुर, तुम्लिंगटारमा उडान भर्दै आएको छ ।
सिम्रिक एयरका प्रमुख प्रज्वल थापाले पनि दशैंका लागि ९५ प्रतिशभन्दा बढी टिकट बुकिङ भइसकेको जानाकारी दिए । ‘टुरिस्टको सिजन र चाडपर्वको एकैचोटि परेकाले पनि टिकट प्याक भएको हो,’ थापाले भने ।
सिम्रिकले पोखरा, भैरवहा, सिमरा, लुक्ला, पोखरा-जोमसोम, माउन्टेन फ्लाइट उडान भर्दै आएको छ भने दशैंका बेला खानीडाँडा र फाप्लुमा पनि उडान भरिने उनले जानकारी दिए ।-पुष्प दुलाल,अनलाइनखबर
9/30/2016 12:42:00 PM समाचार
खोटाङ असोज १४ गते । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न खोटाङमा बेलुका ७ बजेपछि यात्रुबाहक गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ ।
यातायात व्यवसायीकै उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सडक यातायातलाई सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउन भन्दै रातका समयमा गाडी नचलाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन ‘टाइमकार्ड’को समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सडक कालोपत्रेको प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेकै ठेकेदार कम्पनीलाई बिग्रेका सडकखण्ड मर्मत गर्ने जिम्मा दिइएको प्रजिअ कार्कीले जानकारी दिए । अहिले जिल्लाका सबैजसो सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध छन् ।-रासस
मेगी आँधीका कारण आएको पहिरोमा परी चीनमा ३३ जना बेपत्ता
9/30/2016 12:39:00 PM विश्व
बेइजिङ – मेगी नामक समुद्री आँधी कारण भएको भारी वर्षाका कारण आएको पहिरो दुईवटा परेर कम्तिमा ३३ जना हराइरहेको चीनको राष्ट्रिय मिडियाले जनाएको छ ।
यो घटना चीनको पूर्वी भागमा रहेको झेजियाङ प्रान्तमा भएको हो । हराइरहेका मध्ये २७ जना सुकुन गाउँका रहेका छन् । पहिरोमा परेर पूरै गाउँनै बगेको छ । सिन्हुवामा प्रकाशित एउटा भिडियोमा अग्लो पहाडबाट पहिरो खस्दै गरेको देखाइएको छ ।
बुधबारदेखि मेगीका कारण चीनका विभिन्न भागमा भारी वर्षा भएको थियो ।
सिन्ह्वाका अनुसार वेन्चेन काउन्टीको बाओफेङ गाउँका ६ जना हराइरहेका छन् ।
उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी खटाइएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
त्यसक्षेत्रका वासिन्दालाई अन्यत्र सारिएको छ भने १३ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
चीनअघि मेगीले ताइवानमा विध्वंस मच्चाएको थियो । त्यहाँ चार जनाको निधन भएको थियो भने ६२५ जना घाइते भएका थिए ।
फुजियानमा पनि एक जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । चीनका विभिन्न भाग जलमग्न बनेको छ भने बाढीका कारण लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन् । फुजियनमा मात्र दुई दिनमा ३ सय मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।- रातोपाटी बाट
9/30/2016 12:02:00 PM विचार
विश्वमा परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा महिलाको सशक्त भूमिका रहेको छ । नेपालमा पनि आधा हिस्सा ओगटेका महिलाले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तै, शैलजा आचार्य, साहना प्रधान, मोती देवीहरु जसले आफ्नो घर परिवार सम्हाल्नेदेखि राजनीतिक आन्दोलनलाई समेत धान्ने हिम्मत राखे । विश्वमा शक्तिशाली महिलामा जर्मन चान्र्सलर, एन्जोलिना मार्केल छन् भने नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । अवसर पाउने हो भने महिलाले विश्व हल्लाउन सक्छन् भन्ने यसले प्रष्ट पार्छ ।
नेपालमा अहिले व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख पनि महिला नै छन् । महिलाहरु सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा सशक्त भइसकेका छन् र हुँदैछन् । सधैँ चुलोचौको गर्दै दिन बिताउने महिलाले अवसर पाए भने राजनीतिक र सामाजिक रुपमा पनि अगाडि आउन सक्छन् ।
दलित त्यसमा पनि महिला हुुनुको पीडा भनिसाध्य छैन । दलित महिला भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने हाम्रो समाजमा उनीहरु राजनीतिक मूल नेतृत्वमा आउनु निकै सहासिक कार्य हो । नेपालको इतिहास केलाउने हो भने सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको पनि अन्य महिलाको जत्तिकै भूमिका छ । सहिद सेतु विक यसैको उदाहरण हुन् । अशिक्षा, गरिबी र पुरुषवादी परम्परासँग सङ्घर्ष गर्नु त छँदैछ, त्यसमाथि दलित महिलाले जातीय विभेद र छुवाछूतको सामना पनि गर्नुपर्छ । जुन आम महिलाले भोग्नुपर्दैन ।
उत्तिकै क्षमता र सामथ्र्य हँुदाहुँदै पनि दलित महिलाहरु आम महिलाको तुलनामा नेतृत्वमा आउन नसक्नुको कारण जातीय विभेद मुख्य हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । वर्तमान मन्त्री मण्डलमा एक जना पनि दलित महिलालाई पूर्ण मन्त्री बनाइएको छैन ।
भगत सर्वजित विश्वकर्माले सुरु गरेको नेपालको दलित आन्दोलन अहिलेको पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि सफलता पाउन नसक्नु विडम्बना बनेको छ । दलित मुक्तिका लागि कयौं आन्दोलन भए, वार्ताहरु भए, सम्झौताहरु भए, केही कानुनहरु बने तापनि जातीय विभेद र बहिष्कारभने ज्यँुकात्युँ नै छन् । उही वेदना, उही छुवाछूत, उही भेदभाव । दलित मुद्दाले राष्ट्रिय मुद्दा हुने अवसर अझै पाउन लायक ठानिएन । जबसम्म दलित मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा मानिँदैन राष्ट्रिय समस्या ठानिँदैन तबसम्म दलितको अवस्था फेरिँदैन, फेरिनेवाला छैन ।
अन्य आन्दोलनहरुमा जस्तै दलित आन्दोलनमा पनि दलित महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । घरको चुलोचौका र कामकाजले मात्र दलित महिलाले सुख पाउँदैनन् । घरको काम सगँसगैँ साहु महाजनकोमा मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी घरधन्दा र मेलापात गर्दैमा नभ्याउने दलित महिलाले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । यस्ता अनेकन चुनौतीका बाबजुद दलित महिलाले सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन सक्नु निक्कै प्रशंसनीय छ । आगामी दिनमा अब दलित महिलाले नै सिङ्गो दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्छ । दलित आन्दोलनलाई एउटा निश्चित विन्दुमा पुर्याउनका निम्ति पनि अब दलित महिलाले दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ ।
एउटा बिन्दुमा पु¥याउनको निम्ति दलित महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसको मतलब पुरुषको आवश्यकता नै छैन भन्ने होइन । समाज परिवर्तनको सुरुवात हामीबाटै गरौँ । सवालटर्न भनिएका दलित महिलालाई दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न दिऔँ । जसले गैरदलितलार्ई ठूलो धक्का लाग्ने छ । लैंगिक समानताको भाषण गरेर नथाक्ने गैरदलित नेतृत्व दलित आन्दोलनसँग झुक्न बाध्य हुनेछ ।
माओवादी पत्रकारको भेलामा प्रचण्डले बोल्दा ‘हुन्न’ भन्दै हुटिङ
9/30/2016 11:50:00 AM समाचार
काठमाडौं,असोज १४ गते । माओवादी सम्बद्ध पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर भेलामा पार्टी अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्दा हुटिङ भएको छ ।
कार्की पार्टी प्यालेसमा जारी बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दे प्रचण्डले अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने वा युवा पुस्तालाई ल्याउने विकल्प रहेकेा बताए । उनले यसो भन्दा सहभागीहरले धेरैबेर ताली बजाए । र, प्रचण्ड पनि बोल्न रोकिए ।
त्यसपछि प्रचण्डले तर…भन्दै पार्टी एकताको भाव र बाध्यतालाई बुझ्नु पर्ने भएकाले सिनियरलाई नेतृत्व दिन सुझाए । पार्टी पोलिटव्यूरो सदस्य महेश्वर दाहाल तर्फ संकेत गर्दै उनले सिनियरले केही महिना अविभावकत्व गर्ने र त्यसपछि युवालाई नेतृत्व दिने बताए ।
हलमा सहभागीले भने प्रचण्डको यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै ‘हुँदैन’ भनेर हुटिङ गरेका छन् ।
प्रचण्ड आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिएपछि वर्षमान पुन अनन्तले बोले । उनी बोलिरहँदा अधिकांश सहभागी हल्ला गर्दे हलबाट बाहिरिएका छन् । र, अहिले बन्दसत्र स्थगित भएको छ ।
नेपाली बजारमा लोकप्रिय हुँदै ‘वान प्लस थ्री’ स्मार्टफोन
9/30/2016 11:48:00 AM आर्थिक
चिनियाँ स्मार्टफोन वान प्लस नेपालमा प्रवेश भएको छोटै समयमै लोकप्रिय भएको छ । ६ महिनाअघि मात्र नेपाल भित्रिएको यो ब्राण्डलाई धेरैले रुचाएका छन् । ‘वान प्लस थ्री’ मोडलको सेटमा उपभोक्ताको आकर्षण बढदो छ ।
गत मे महिनाबाट वान ‘वान प्लस थ्री’ नेपालमा बिक्री सुरु भएको थियो । चर्चित एप्पल र सामसुङ लगायतका स्मार्टफोनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यो सफल भएको छ ।
‘वान प्लस’ स्मार्टफोनको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता आइ हबका अनुसार पहिलो लटमा नेपाल भित्रिएका सबै सेटहरु बिक्री भइसकेको र नयाँ दोस्रो लटको समेत आइसकेको छ ।
के छन् त खास विशेषता
यो स्मार्टफोनमा वान प्लस स्मार्टफोन ५.५को टच स्क्रिनको साथमा १०८०/१९२० पिक्सलका रेजुलेशन छ । यसको मूल्य नेपाली बजारमा ४९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
‘वान प्लस थ्री’ स्मार्टफोनमा ६ जीबी र्‍याम र ६४ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज क्षमता छ । यो फोनमा १६ मेगापिक्सलको रियर क्यामेराको साथमा सेल्फीको लागि ८ मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
एन्ड्रोइड ६.०.१ भर्सनको फोनमा ३ हजार एमएएचको पावर ब्याट्री छ । स्मार्टफानेमा दुई नानो सिम लाग्छ । ‘वान प्लस थ्री’ फोनले फोरजी समेत सर्पोट गर्छ ।-अनलाइनखबर
वायु प्रदुषणविरुद्ध नाटकीय रुपमा काम गर्न डब्लुएचओको आह्वान
9/30/2016 11:45:00 AM स्वास्थ्य
'विश्वका ९० प्रतिशत मानिस अस्वस्थकर श्वास फेर्छन्'
विश्वका १० मध्य ९ जना मानिसले अस्वस्थकर श्वास फेर्नेे गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ । डब्लुएचओले हालै एक प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै प्रदुषण वायु प्रदुषणविरुद्ध नाटकीयरुपमा काम गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
वायु प्रदुषणकै कारण विश्वमा हरेक वर्ष ६० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओको अनुमान छ ।
नयाँ तथ्यांकबाट आफूहरु चिन्तित बनेको डब्लुएचओको सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वातावरण विभाग प्रमुख मारिया नेइराले बताइन् ।
प्रदुषणको समस्या शहरमा बढी भएपनि गाउँमा यसको अवस्था सोचेभन्दा बढी दयनीय रहेको डब्लुएचओका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
विश्वका विकसित मुलुकको तुलनामा अविकसित देशहरुमा दुषित हावा पाइने गरेको डब्लुएचओको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर व्यवहारिक रुपमा यो प्रदूषणले विश्वका सबै देश तथा वासस्थानलाई असर पारेको नेइराले वक्तव्यमा भनेकी छिन् ।
‘यो जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आपतकालीन अवस्था हो’, नेइराले भनिन्, ‘वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने छिटो काम तत्काल लागू हुन सक्तैन ।’
सवारी साधनको संख्या घटाउन र फोहर व्यवस्थापन गर्न जोड
यसका लागि सरकारले सडकमा सवारी साधनको संख्या घटाउनुपर्ने तथा फोहर व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने डब्लुएचओले आह्वान गरेको छ । यसका साथै खाना पकाउन स्वस्थ्य र सफा इन्धन प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
आज पेश गरिएको यो प्रतिवेदन विश्वका तीन हजार ठाउँबाट जम्मा पारिएको तथ्यांकमा आधारित छ ।
तथ्यांक अनुसार विश्वका ९२ प्रतिशत जनसंख्या प्रदुषित वायु भएको स्थानमा बस्ने गर्छन् । जहाँ वायु प्रदूषणको स्तर डब्लुएचओले तोकेको सीमा भन्दा अधिक छ ।
डब्लुएचओका अनुसार वायु प्रदुषणसित सम्बन्धित झण्डै ९० प्रतिशत मृत्यु निम्न तथा मध्य आय भएको देशहरुमा हुने गर्दछ ।
त्यस्तै दक्षिणपूर्वी एसिया तथा चीन, मलेसिया, भियतनाम सहितका पश्चिमी प्रान्त क्षेत्रमा यो संख्या अझै धेरै भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
9/30/2016 11:42:00 AM खेलकुद
स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियनो रोनाल्डो पोर्चुगलको विश्वकप छनौट टोलीमा फर्किएका छन् ।
रोनाल्डो विना स्विट्जरल्याण्डविरुद्ध उत्रिएको टोली विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा २-० ले पराजित भएपछि प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले नयाँ निर्णय लिएका हुन् ।
रोनाल्डो युरोकपको फाइनलमा घाइते भएकाले पनि सान्तोषले उनलाई आराम दिन चाहेका थिए । तर, त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्‍यो ।
साथै रोनाल्डो चोटमुक्त भएर क्लब फुटबलमा फर्किसकेका छन् । जसले उनलाई टोलीमा राखिएको छ ।-अनलाइनखबर
यसरी हटाउनुहोस् झुटो बोल्ने बानी
9/30/2016 11:40:00 AM स्वास्थ्य
ढाँट्ने बानीले कतिपयलाई हैरान बनाएको हुन्छ । हैरान बनाउने यस्तो बानी छोड्न सजिलो भने छैन् । साँच्चिकै ढाँट्न बन्द गर्नलाई यी उपाय उपयोगी हुन सक्छन् :
कुनै पनि समस्याको समाधानको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ । यसैले ढाँट्ने बानी भएकाहरुले पनि कुन प्रयोजनका लागि आफूले ढाँट्ने गरेको छु भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । कुनै समस्याबाट बच्न अरुलाई छकाउन अथवा रमाइलो गर्न आफैले ढाँट्ने गरेको छु भन्ने पत्ता लगाउनुहोस ।
किन्न छाड्ने भन्नेबारे सोच्ने
ढाँट्ने बानीले तपाईलाई हलुका बनाउने र अरुको सामुन्ने अपत्यारिलो बनाउने गर्दछ । यस्ता बानीले तपाईको जीवनमा के कस्ता समस्या निम्त्याएका छन भन्ने सम्झनुहोस ।
ढाँट्ने बानी चुरोट, रक्सी, सुर्ती र ड्रग्सलगायतको अम्मल हो भने संकल्प गर्नुहोस । यसले तपाइलाई झुटो बोल्न प्रोत्साहित गर्दछ । बोल्दै गर्दा झुटो बोलिन्छ कि भनेर चनाखो रहनुहोस । झुटो बोल्न लागेको हो भने आफूलाई सजग राख्नुहोस ।
बोल्दै गर्दा झुटो बोली पो हालिन्छ कि भन्नेमा चनाखो रहनुहोस् । झुटो बोल्न लागेको थाहा भयो भने आफूलाई सम्हालनुहोस् ।- रातोपाटीबाट
जानी राखौं मेथीका फाइदा
9/30/2016 11:34:00 AM स्वास्थ्य
मेथी हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । यो हाम्रो खानामा जडीबुटीका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेथीलाई मसलाको रुपमा पनि हामीले खानामा प्रयोग गर्छौं । यसको स्वाद कडा हुनुका साथै तितो हुन्छ । यद्दपी यसमा कर्वोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्याल्सियम, फाइबर तथा फस्फोरसको मात्रा अधिक हुन्छ ।
हाम्रो शरीरलाई अधिक मात्रामा फाइदा पुर्‍याउने मेथीका बारेमा आउनुस् हामी पनि जानी राखौ यी कुरा ।
मुटु सम्बन्धि रोग लाग्न दिँदैन
मेथीको दानामा गेलोक्टोमेनन पाइन्छ । यसले तपाईंको मुटुलाई स्वस्थ्य बनाउन मद्दत गर्नुका साथै मुटु सम्बन्धि रोगको जोखिमबाट समेत रोक्ने काम गर्छ ।
यसमा भएको पोटासियमले मुटुको गतिलाई कायम गर्न तथा नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ ।
पाचन प्रकृयामा लाभदायक
फाइबर तथा एन्टीअक्सिडेन्टले भरिपूर्ण मेथीले शरीरमा भएका हानीकारक विषाक्तलाई बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, मेथीको पानीलाई पित्त, अपच तथा पेटको दुखाई कम गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तौल कम गर्न लाभदायक
तौल कम गर्नमा पनि मेथी लाभदायक मानिन्छ । किनकी यसमा प्राकृतिक रुपमै फाइबर रहेको हुन्छ जसले तपाईलाई भोक दवाउन मद्दत गर्छ ।
व्लड सुगर नियन्त्रण गर्छ
मधुमेहका विरामीले मेथीलाई आफ्नो खानामा दैनिक प्रयोग गरेको खण्डमा मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसमा गेलोक्टोमेनन हुन्छ, जुन आफैमा एक प्रकारको घुलनशील फाइबर हो । यसले रगतमा चिनीको स्तरलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
शरीर सुन्निनबाट जोगाउँछ
मेथीमा जलन तथा सुन्निएको कम गर्ने तत्व हुन्छ । यसले मुखको अल्सर, पिलो, ब्रोङ्काइटिस, छालाको समस्या, कडा खोकी, क्यान्सर, मिर्गौला सम्बन्धि समस्या घटाउन मद्दत गर्छ ।
त्यसैगरी मेथीले शरीरबाहिर समेत घाउ हुँदा तथा चोटपटक राख्दा औषधिको रुपमा काम गर्छ ।
विशेषगरी मेथीलाई कपडामा बेरेर सुन्निएको ठाउँमा सिधै राखेमा पनि यसले औषधिको रुपमा काम गर्छ । त्यस्तै, दुखाई कम गर्न, मांसपेशी सुन्निएको कम गर्न, गाउट, घाउ, खुट्टाको अल्सर, चायाँ कम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
मेथीमा कति पोषकतत्व हुन्छ ?
एक चिया चम्चा मेथीमा ३५.५ ग्राम क्यालोरी, ६.४ ग्राम कार्बोहाइडे्रट, २.५ ग्राम प्रोटिन, ०.७ ग्राम चिल्लोपना, २.७ ग्राम फाइबर, ३.७ मिलिग्राम आइरन, ०.१ मिलिग्राम मेग्निस पाइन्छ ।
यसैगरी ०.१ मिलिग्राम कपर, २१ मिलिग्राम म्याग्नेसियम, ३२.६ ग्राम फोस्फोरस, ७.४ मिलिग्राम सोडियम, ०.१ मिलिग्राम भिटामिन बी सिक्स र ०.३ मिलिग्राम भिटामिन सी पाइन्छ ।
टेलिकमले गर्‍यो चाडबाडका लागि छुट र बोनसको घोषणा
9/29/2016 04:53:00 PM आर्थिक
नेपाल टेलिकमले दशैं, तिहार तथा छठका अबसरमा विभिन्न अफरमार्फत सेवाहरुमा छुट प्रदान गर्ने भएको छ । टेलिकमले विभिन्न सेवाहरुमा फरक-फरक छुटको घोषणा गरेको हो ।
जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड तथा पोष्टपेडका ग्राहकहरुलाई डाटा अफर प्रदान गरिएको छ । त्यसमा निःशुल्क भ्वाइस तथा एसएमएस समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो अनुसार आगामी असोज १५ देखि २९ गतेसम्म र कात्तिक १२ देखि २१ गतेसम्म १०० एमबीको डाटा ५० रूपैयाँमा र २५० एमबीको डाटा १ सय रूपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ ।
१०० एमबी डाटाको अवधि ५ दिन सम्म र २५० एमबी डाटाको अवधि १० दिनसम्म रहने छ । सो अवधिमा डाटा प्रयोगकर्ताले क्रमशः १० मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा १० वटा एसएमएस पठाउन र २५ मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा २५ वटा एसएमएस पठाउन पनि सक्ने छन् ।
जीएसएम तथा सीडीएमए दुवैमा नाइट डाटा अफर पनि उपलब्ध गराइने छ । सो अनुसार राती १० बजे देखि बिहान ६ बजेसम्म ४० रूपैयाँमा ५०० एमबी र ८५ रूपैयाँमा १२०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी डाटा भोल्युमको अवधि क्रमशः ७ दिन र १५ दिन हुनेछ । नाइट डाटा अफर आगामी असोज १५ देखि ३ महिना सम्म उपलब्ध गराइने छ ।
जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवा मार्फत कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने कलमा विद्यमान महसुल दरमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको छ ।
सो अनुसार प्रिपेड मोबाइलबाट प्रति मिनेट १.३५ रूपैयाँ र पोष्टपेड मोबाइलबाट प्रति मिनेट ९० पैसामा कल गर्न सकिने छ । उक्त छुट आगामी असोज २२ देखि असोज २९ गते सम्म र कात्तिक १४ देखि २१ गतेसम्म उपलब्ध गराइने छ ।
हाल जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवामा प्रति एसएमएस शुल्क १ रूपैयाँ भएकोमा आगामी असोज २२ देखि २९ गतेसम्म र कात्तिक १४ देखि २१ गतेसम्म प्रत्येक एसएमएसमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने छ ।
टेलिफोनमा थप सय कल फ्रि
कम्पनीबाट वितरण गरिएको स्थानीय टेलिफोन सेवामा २ सय रूपैयाँमा १७५ कल निःशुल्क उपलब्ध गराई आएकोमा असोज र कात्तिक महिनाको मासिक महसुल २ सय रूपैयाँमा थप १ सय लोकल कल उपलब्त्र गराइने छ ।
सो अनुसार अब असोज र कात्तिक महिनामा १७५ रूपैयाँमा १०० कल थप गरी २७५ लोकल गर्न सकिने छ ।
भ्यालिडिटी थप गर्ने
दशैं, तिहार तथा छठको समयमा भ्यालिडिटी सकिने भाेलुम बेस्ड तथा अनलिमिटेड एडीएसएल का ग्राहकहरुलाई समय थप गरिने छ । वाइम्याक्स तथा एफटीटीएच ग्राहकहरुको हकमा डाटा भाेलुम बाँकी भएको तर भ्यालिडिटी सकिएको खण्डमा समय थप गरिने छ ।
सो अनुसार दशैंको समयमा असोज २२ देखि असोज २८ सम्म भ्यालिडिटी सकिने ग्राहकको अवधि असोज २९ गतेसम्म र तिहार तथा छठको समयमा कात्तिक १४ देखि कात्तिक २० गतेसम्म भ्यालिडिटी सकिने ग्राहकको अवधि कात्तिक २१ गतेसम्म थप गरिने छ ।
यस्जीतै एसएम प्रिपेड तथा सीडीएमए प्रिपेडमा एमपाेस सिस्टमबाट १०० रूपैयाँ र सो भन्दा माथिको दरको रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत टल्क बोनस उपलब्ध गराइने छ । यी कुनै महसुल दरहरुमा नेपाल सरकारको नियमानुसार लाग्ने कर समावेश गरिएको छैन ।
एकीकृत ब्यापार रणनीति तयार, १२ वटा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता
9/29/2016 04:50:00 PM आर्थिक
सरकारले अलैंची, अदुवा, औषधीजन्य जडिबुटी लगायतका वस्तुको निर्यातलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर व्यापार एकीकृत रणनीति बनाएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले बिहिबार काठमाडौमा उद्योगी व्यवसायी र दातृ निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
रणनीतिमा कृषिजन्य क्षेत्रतर्फ अलैंची, अदुवा, चिया र औषधीजन्य जडिबुटी, औद्योगिक उत्पादनतर्फ कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना तथा सेवा क्षेत्रतर्फ दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधि र पर्यटन गरी १२ वटा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले जलविद्युत, कफी, फलफूल र तरकारी, मह, चाउचाउ, उनीका उत्पादन र चाँदीका गहनालाई पनि निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तुको सूचीमा राखेको छ । यी वस्तुलाई ६ वर्ष पहिलेको रणनीतिमा पनि निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा राखिएको थियो ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले भने निर्यात बढाउनका लागि रणनीति पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । उनीहरुलेे विद्युतको अभाव, मजदूरको हड्ताल लगायतका अनेकौं समस्याले गर्दा उत्पादन लागत धेरै भइ नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेकाले निर्यात बढाउन रणनीतिमा समावेश गरिएजस्तो सजिलो नरहेको बताए । उनीहरुले सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे मात्र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताए ।
जवाफमा वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्नका लागि सरकारले उद्योगी र कृषकहरुलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
9/29/2016 04:46:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १३ गते । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बोटलर्स नेपाल ( कोकाकोला) कम्पनी ३२ वर्षसम्म अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेको फेला परेको छ ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले बुधबार गरेको अनुगमनका क्रममा २०४१ सालदेखि हालसम्म अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालन भइरहेको फेला परेको हो । कार्यालयका प्रमुख शशिभूषण यादवले पछिल्लो समय अनुमतिपत्र नलिई धेरै कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका उजुरी आएपछि अनुगमन कार्य बढाएको बताउनुभयो ।
“कोकाकोला जस्तो बहुप्रतिष्ठित कम्पनीले लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालन गरिरहेको छ भने अरुको हालत के होला रु,” उहाँले भन्नुभयो । उक्त कम्पनीबाट कानुन बमोजिम रु चार हजार जरिवाना असुल गरिएको छ ।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भएका कर्माचार्य प्लास्टिक उद्योग, मोर्डन चप्पल इन्डट्रिज, बालाजु दाल मिल समेत अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका र ढक तराजु जाँच नगरेको फेला परेको छ । यी तीनवटै कम्पनीको ढक तराजु जफत गराई तीनदिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
भारतीय सेनाले ‘सर्जिकल अपरेशन’ को दाबी गरेपछि पाकिस्तानको प्रतिक्रिया
9/29/2016 04:44:00 PM विश्व
भारत–पाक नियन्त्रण रेखामा भारतीय सेनाले सर्जिकल अप्रेशनको घोषणा गरेपछि पाकिस्तानले सर्जिकल स्ट्राइक नभएको बताएको छ ।
पाकिस्तानी सेनाले भनेको छ ‘सर्जिकल स्ट्राइक होइन ,भारतले सीमापारीबाट फाइरिङ गरेको हो । जसको पाकिस्तानी सेनाले उचित जवाफ दिएको छ । भारत आतंकवादी अड्डामा सर्जिकल स्ट्राइसको कुरा जानिबुझी झुठो तस्वीर बनाउनको लागि लागेको छ । ’
पाकिस्तानी सेनाले यो पनि भनेको छ कि भारत सरकार सीमापारी फाइरिङलाई मिडिया हाइपको माध्यमले सर्जिकल स्ट्राइक्स झै पेश गरीरहेको छ ।
पाकिस्तानी सेनाले भनेको छ, ‘ गोलाबारी राती ढाई बजेबाट सुरु भएर बिहान आठ बजेसम्म जारी रहेको थियो । नियन्त्रण रेखामा पार गरेर नभई भारतको तर्फबाट भिम्बर,हाट स्प्रिङ,केल र लीपा सेक्टरमा फायरिङ भयो । ’
पाकिस्तानी सेनाको तर्फबाट जारी आधिकारीक बयानमा भनिएको छ ‘यदि पाकिस्तानको जमिनमा कोहि सर्जिकल स्ट्राइक्स भएमा त्यसको कडा जवाफ दिइने छ ।’
पाकिस्तानी च्यानल पीटीवीका अनुसार प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले भारतको कडा निन्दा गरेका छन् र मारिएका सैनिकहरुलाई श्रद्धान्जली दिएका छन् ।-एजेन्सी
पहिलोपटक जन्माइयो ३ जना आमाबावुबाट एउटा बच्चा
9/29/2016 04:19:00 PM स्वास्थ्य
सन्तानोत्पादन कार्यमा महिला र पुरुषको भूमिका रहन्छ । अर्थात् एक जना महिला र एकजना पुरुषबीचको समागमपछि गर्भ रहेसँगै महिलाको पाठेघरमा भ्रुणको सिर्जना हुन्छ ।
यसरप्रकार कुनैपनि बच्चा जन्मिनका लागि दुइजना मानिस, एकजना आमा र एकजना बुवाको भूमिका हुन्छ । तर वैज्ञानिकहरुले भने दुइजना मात्र होइन ३ जना आमाबुवा भएको बच्चाको जन्म गराउन सफल भएका छन् ।
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले विश्वमा पहिलोपटक तिन जना मानिसबाट एउटा सन्तान जन्म गराएका हुन् । यो नयाँ प्रविधि अन्तरगत तिनजना महिला पुरुषको डिएनएको प्रयोग गरी भ्रुण तयार पारिएको हो ।
अमेरिकी डाक्टरहरुको प्रयास तथा हेरचाहमा जोर्डनका एक दम्पत्तिले पाँच महिना पहिले मेक्सिकोमा ३ आमाबुवा भएको बच्चा जन्माए । बच्चा पूर्णरुपमा स्वस्थ रहेको बताइएको छ ।
उक्त बच्चाको आमाको सरीरमा लेघ सिन्ड्रोम नामक रोगको वंशाणु थियो । यो रोगका कारण स्नायु प्रणाली रोगग्रस्त हुन्छ । ती महिलाको माध्यमबाट यो रोग उनका यसअघिका दुइ बच्चामा सरिसकेको थियो र रोगकै कारण दुबै बच्चा मरे । रोगकै कारण यी महिलाको जम्माजम्मी ४ पटक गर्भपात भैसकेको थियो ।
पटक पटक गर्भपात तथा जन्मिएको बच्चा समेत रोगका कारण मरेसँगै यो दम्पत्तिले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको न्यू होप फर्टिलिटी सेन्टरका डाक्टर डन झेंगसँग सहयोग लिए । डाक्टरको उपचारपछि महिलाको सरीरमा भएको रोगयुक्त जिन बच्चामा नसर्ने भएको छ ।
डाक्टरले नयाँ प्रविधिको सहायताले रोगयुक्त माइटोकोन्डि्रयालाई आमाको जिनबाट हटाइदिए । त्यसपछि आमाको डिएनएको न्युक्लियसको प्रयोग गरे र त्यसलाई दाताको डिम्बसँग जोडिदिए ।
दाताको डिम्बको न्यूक्लियस हटाइएको थियो । यसलाई न्युक्लिएर ट्रान्सफर भनिन्छ । यसमा वास्तविक आमा र दाता आमा दुबैका डिम्बको प्रयोग गरिन्छ । त्यसरी तयार पारिएको डिम्बलाई लोग्नेको शुक्रकिटसँग फर्टिलाइजेसन गराइयो ।
ऋमेरिकी डाक्टर जोन झांग नेतृत्वको टोलीले ३ आमाबुवाबाट सन्तान जन्माउने कार्यमा सफलता प्राप्त गरेका भएपनि कतिपयले भने अमेरिकी डाक्टरहरुले नियमन विना तथा उपचारको विवरण सार्वजनिक नगरीकन यस्तो प्रविधि अपनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
स्मरण रहोस् अमेरिकामा यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित छ तर मेक्सिकोमा भने यस सम्बन्धी कुनै कानून नै छैन ।
कुनै घातक वंशाणुगत रोग भएका आमाबुवाबाट सन्तानमा त्यस्तो रोग नसरोस् भन्नका लागि यो प्रविधि निकै लाभदायी हुने देखिएको छ ।-बीबीसीको सहयोगमा
अफगानिस्तानले बंगलादेशलाई मिरपुरमै हरायो
9/29/2016 04:16:00 PM खेलकुद
दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा अफगानिस्तानले बंगलादेशलाई उसकै घरेलु मैदानमा हराएको छ । २ विकेटको जितसँगै अफगानिस्तानले तीन म्याचको श्रृखलामा १-१ को बराबरी गरेको छ ।
मिरपुरमा पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले अन्तिम ४ बल खेल्नु अघि सबै विकेट गुमाएर २०८ रन बनायो । उसका लागि मोसादिक हुसेनले ४५ र मुस्पिmकर राहिमले ३८ रन बनाए ।
अफगानिस्तानका रसिद खानले ३ र मोहम्मद नावीले २ विकेट लिए ।
२०९ रनको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिएको पाहुना टोलीले अन्तिम २ बल बाँकी छँदा ८ विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो । उसका लागि स्टानिकजाइले ५७ रन बनाए भने नाबीले ४९ रनको योगदान दिए ।
सकिब अल हसन र मोसादिक हुसेनले २ विकेट लिए ।
9/29/2016 04:11:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा समितिका सभापति प्रभु साहले सम्मेलनमा विभिन्न पाँच विषयमा कार्य प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो । रासस
अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने मन्त्री भण्डारीको दृढता
9/29/2016 04:09:00 PM समाचार
चितवन, असोज १३ गते । वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन नभए अहिलेसम्मको उपलब्धि गुम्ने बताउनुभएको छ ।
भरतपुरमा आज बिहान पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो अवस्था आए राजनीतिक दलहरुसमेत सङ्कटमा फस्ने बताउनुभयो । सँगै संविधान निर्माणका क्रममा जुटेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलहरुले संविधान कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र यही तथ्यलाई मनन गरी संविधान संशोधन विधेयक अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले चितवनको बाँदरझुलामा सुकुम्बासीभन्दा हुकुमबासी बढी भएको भन्दै अतिक्रमित निकुञ्ज क्षेत्र खाली गर्ने दृढता प्रकट गर्नुभयो । “जसको आफ्नो जग्गा छ, उनीहरु आफ्नै जग्गामा जानुपर्छ, जसको छैन उनीहरुलाई सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ” – मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । देशभरका अतिक्रमण भएका वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
अतिक्रमण हटाउन अन्य मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । रासस
हलियाको आशालाई निराशा हुन दिन्नँ – मन्त्री पाण्डे
9/29/2016 03:47:00 PM समाचार
काठमाडौँ, असोज १३ गते । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री विक्रम पाण्डेले हलियाको आशालाई आफूले निराशामा परिणत हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुक्त हलियाको वर्तमान अवस्था र सरकारको दायित्व विषय आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले भन्नुभयो – “हलियाले उठाउँदै आएको विषय राष्ट्रको समस्या भएको हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ ।
नेकपा (एमाले) अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले हलियासम्बन्धी विषयलाई श्रमिकको समस्या भनेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
एकले अर्काेलाई भत्काएर र भड्काएर समस्या निराकरण हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “यो समस्या अवधि तोकेर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद कर्णबहादुर विकले हलियाको सङ्ख्या बढाउने र घटाउने कार्यले वास्तविक हलिया मारमा पर्न सक्ने पक्षलाई हेक्का राखेर काम गर्न सचेत गराउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरबहादुर चन्दले हलियासम्बन्धी समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।
सो अवसरमा हलिया मुक्ति आन्दोलनमा योगदान पु¥याउनुभएका कोपिला नेपाली, रमेश कोली, ईश्वर सुनारलगायतले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलियासम्बन्धी समस्या रहँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
हलियामध्ये ९८ प्रतिशत दलित समुदाय नै रहेको बताउँदै उहाँहरुले बाँझो जमिन जोतेर बसोबास गरेको तथा लिएको ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौँपुस्तादेखि हलिया बन्नु परेको घटना सुनाउनुभएको थियो ।
सरकारले २०६५ भदौ २० गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरु अझै पनि उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका छन् ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १९ हजार ५९ मुक्त हलिया परिवारको लगत प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको कार्य गर्दै आएको छ ।
सरकारले आठ हजार ८८८ जनालाई दुईवर्षभित्र दुई चरणमा गरी पुनःस्थापन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । हलिया मुक्त भएको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा सुधार, जग्गासम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था र क्षतिपूर्ति एवम् राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । रासस
9/29/2016 01:38:00 PM फोटो समाचार
बेनीको कालीपुल बसपार्कमा सोह्रश्राद्ध सकिन केही दिन बाँकी रहँदा सडक मार्ग भएर मुक्तिनाथ र कागबेनी जाने तीर्थयात्रीको भीड । तस्बिर - सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस
राष्ट्रपति भण्डारीबाट संस्कृतिविद् जोशी सम्मानित
9/29/2016 01:35:00 PM मुख्य समाचार , समाचार
पोखरा, असोज १३ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई आज बिहान हेमदेवी धर्म संस्कृति तथा समाजसेवा पुरस्कारबाट सम्मान गर्नुभएको छ ।
विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिद्वारा सञ्चालित तथा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हेमबहादुर प्रधानले स्थापना गर्नुभएको सो पुरस्कारको राशि रु एक लाख एक हजार र सम्मानपत्र रहेको छ ।
संस्थापक प्रधानले आपूm र आफ्नी स्व श्रीमतीको नाममा पुरस्कार सञ्चालन गर्न रु १५ लाख राशिको एक अक्षयकोष स्थापना गरिदिनुभएको छ र प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा धर्म, संस्कृति र समाजसेवाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने संस्था वा व्यक्तिलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । जोशी सो पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने पहिलो स्रष्टा हुनुहुन्छ ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पोखरा नगरीमा अवस्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले एक गुरुयोजना तयार गरी मन्दिर क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न सके स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाका लागि धार्मिक पर्यटकीयस्थल बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई यस पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न पाउँदा पुरस्कार र संस्थाको गरिमा बढेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा जोशीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
पुरस्कारका संस्थापक हेमबहादुर प्रधानले नेपाली संस्कृतिका शिखर पुरुष जोशीलाई आपूmले स्थापना गरेको पहिलो पुरस्कारबाट सम्मान गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
छयानब्बे वसन्त पार गरेका पुरस्कृत व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीले साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा आपूmले गरेको कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा समितिका सचिव तीर्थ श्रेष्ठले पुरस्कारका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।
दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ - प्रधानमन्त्री दाहाल
9/29/2016 01:27:00 PM मुख्य समाचार , राजनीति
9/29/2016 01:12:00 PM समाचार
पाँचथर, असोज १३ गते । नेपालीहरुको महान् पर्व दसैँ तिहार नजिकिँदै जाँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको अधिकांश सडक अवरुद्ध हुँदा ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ ।
9/29/2016 12:47:00 PM धर्म
मुस्ताङ,असोज १३ गते । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रविन्दु प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथको वार्षिक आम्दानी ६७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास समितिले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक आयव्ययमा रसिद सहयोगबाट सबैभन्दा बढी ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, सुन बिक्रीबाट रु १२ लाख सात हजार र बैंक ब्याजबाट रु तीन लाख ८० हजार गरी ६७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको समितिका अध्यक्ष एवम् मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहयोगदाताबाट स्वतःस्फूर्तरुपमा सहयोग आउने क्रम बढेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास समितिको खातामा यसअघि एक करोड ३५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मौज्दात थियो । एक वर्षको अवधिमा तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, सवारी भाडा, बिजुली, सरसफाइ, मेला व्यवस्थापन, बंैक कर, अनुगमन तथा भ्रमण, सञ्चालन मर्मत, फर्निचर, लेखापरीक्षण गरी १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“एक करोड ९० लाख ३२ हजार रुपैयाँ अझै हाम्रो खातामा छ, यसलाई आवश्यकताको आधारमा खर्च गर्दै जानेछौँ”, प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो । मुक्तिनाथको आन्तरिक आयबाट चालु आर्थिक वर्षमा मन्दिरको छाना मर्मत, धारा तथा धुप बाल्ने ठाउँ निर्माण, सार्वजनिक चौतारा निर्माण र कार्यालय सञ्चालनका लागि रु ३७ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।
मुक्तिनाथमा दुईजना सहयोगी कर्मचारी, मुख्य पुजारीसहित केही आनीले काम गर्दै आएका छन् । कागबेनीमा पितृतर्पण र स्नानपछि अधिकांश भक्तजन मुक्तिनाथ पुग्ने गरेका छन् । मुक्तिनाथमा नेपालका साथै छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत भक्तजन दर्शनका लागि आउने गरेका छन् । रासस
9/29/2016 12:40:00 PM स्वास्थ्य
पथरी (मोरङ), असोज १३ गते । पथरी शनिश्चरे–१२ की शर्मिला शर्माको प्रसूतिको शल्यक्रिया गर्दा कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका चिकित्सकले रु चार हजार रुपैयाँको औषधि किनाउनुभयो ।
व्यथा लगाउने औषधि सिनटो सिन, शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सकले लगाउने ग्लोब, कटन, शल्यक्रिया गरिसकेपछिको घाउ सिउने धागोसमेत चिकित्सकले किन्न लगाउनुभयो । उहाँ मात्र होइन बबिया विर्ताका रोजिना अधिकारीको प्रसूतिको शल्यक्रिया गर्दा पाँच हजार रुपैयाँको औषधि लाग्यो । उहाँका श्रीमान् खेम अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा प्रसूति गराउँदा तीनदेखि सात हजारसम्मको शल्यक्रियाका लागि औषधि नै खरिद गर्नु परेको छ ।
स्थानीय सुभाष कामतका अनुसार एक वर्षदेखि अस्पतालले प्रसूतिका सेवाग्राहीलाई रु पाँचहजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि किनाउने गरेको छ । सो अस्पतालमा दैनिक एक हजार सर्वसाधारण सेवा लिन आउने गरेका छन् । - गोपाल प्रसाद पोखरेल , रासस
9/29/2016 12:34:00 PM खेलकुद
काठमाडौँ, असोज १३ गते । नेपालको थ्रीस्टार क्लब भारतको गुवाहाटीमा जारी ६४आँै संस्करणको बोर्डोलोई ट्रफी फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
गुवाहाटीस्थित नेहरु स्टेडियममा बुधबार अबेर राति भएको सेमिफाइनलमा नेपाली राष्ट्रिय लिग विजेता थ्री स्टारले घरेलु टोली युनाइटेड सिक्किमलाई ४–१ ले हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको हो । निर्धारित ९० मिनेट १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो ।
तर अतिरिक्त समयमा थ्री स्टारले थप तीन गोल ग¥यो र फराकिलो जित निकाल्यो । थ्री स्टारका लागि अफ्रिकी खेलाडी मार्टिनले दुई तथा विजय गुरुङ र विजय धिमालले समान एक गोल गरे ।
खेलको मध्यान्तरअघि दुवै टोलीले गतिलो आक्रमण बुन्न सकेनन् । मध्यान्तरपछि भने थ्री स्टारले खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन ग¥यो । असिमजङ्ग कार्कीको स्थानमा विजय गुरुङलाई मैदान छिराउने प्रशिक्षक मेघराज केसीको रणनीति सफल देखियो ।
उपाधि भिडन्तका लागि फाइनलमा अब थ्री स्टारले भारतको इस्ट बङ्गालसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । बुधबार नै भएको खेलमा इस्ट बङ्गालले सिलोङ लाजोङ फुटबल क्लबलाई पराजित गर्दै थ्री स्टारसँग उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो । फाइनल शुक्रबार हुनेछ । रासस
विश्व बजारमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खस्कियो
9/28/2016 05:48:00 PM आर्थिक
काठमाडौं,असोज १२ गते । विश्वमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको हो ।
विश्व आर्थिक मञ्चले विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सम्बन्धी १३८ देशको तुलनात्मक अध्ययन गरी बुधबार संसारभर एकैसाथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा नेपाल ९८ औं स्थानमा छ ।
जबकि नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै बलियो छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धी बजारका लागि चीन २८ औं र भारत ३९ औं स्थानमा छन् ।
विश्व आर्थिक मञ्चका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्राध्यापक डा. रमेश चित्रकारले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारी र निजी सबै क्षेत्रका उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर र सरकारी निकाय लगायतका विभिन्न संस्थाबाट तथ्यांक लिएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको डा. चित्रकारले बताए । यो अध्ययन प्रतिवेदन विश्वभर १६० वटा संस्थाले अध्ययन गरेर तयार पारेको उनले बताए ।
दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढिरहेको अवस्थामा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उनीहरुको तुलनामा निकै कमजोर हुनु गम्भीर भएको व्यावसायी महेश अग्रवालले बताए ।
‘खुल्ला सीमाना भएका कारण हाम्रो पहिलो प्रतिस्पर्धा भारतसँग नै हो । तर, भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार आइरहेको छ । यो हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो,’ अग्रवालले भने, ‘भारतले भोलि मजदुरको न्यूनतम तलब ४० हजार राखिदियो भने अधिकांश नेपालीहरु भारतमै श्रम गर्न जान्छन् । र, श्रमिक नपाएर नेपालका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
अग्रवालका अनुसार नेपालको पहिलो चुनौति भनेको विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुभन्दा पनि विश्व बजारका दुई शक्तिशाली देश भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु हो ।
‘जबसम्म हामीले चीन र भारतको ठूलो लगानी भित्र्याउन सक्दैनौं, तबसम्म हामी सम्वृद्धिको बाटोतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्व प्रतिस्पर्धी बजारका लागि स्वीटजरल्याण्ड पहिलो स्थानमा छ भने सिंगापुर दोस्रो स्थानमा छ । सार्क राष्ट्रमा भने भारत सबैभन्दा बलियो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा १२ वटा विषयको वर्गिकरण गरी ध्ययन गरिएको थियो ।
नेपाल के-केमा बलियो ?
श्रम बजारमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता गराउने विषयमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल १३८ देशमध्ये १७ औं स्थानमा छ । ‘श्रम बजारमा महिलाको सहभागिताका आधारमा नेपाल निकै माथि उक्लिनु सुखद भए पनि अधिकांश सूचकांकमा नेपाल कमजोर छ,’ चित्रकारले भने ।
त्यसैगरी, माइक्रोइकोनोमिक व्यवस्थापनमा पनि नेपालले सम्मानजनक अंक पाएको छ । सानो कमाइ भए पनि त्यसले पुर्‍याउन सक्ने नेपाली प्रवृत्तिका कारण माइक्रो इकोनोमिक व्यवस्थापनमा नेपालले राम्रो अंक पाएको हो ।
‘मासिक २०/२५ हजार कमाउने व्यक्तिले पनि राम्रैसँग परिवार चलाएका छन्,’ व्यावसायी अग्रवाल भन्छन्, ‘जसले माइक्रोइकोनोमिक म्यानेजमेन्टमा नेपालको पर्फमेन्स राम्रो देखिएको हो ।’
कानूनी अधिकारको सूचकांकमा पनि नेपाल विशवमा ४६ औं स्थानमा छ । प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थमा पनि नेपालले सम्मानजनक नै अंक प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य र प्राथमिक शिक्षामा ८२ औंै स्थानमा छ ।
के-केमा कमजोर ?
ट्रेड ट्यारिफमा भने नेपाल निकै कमजोर अवस्थामा छ । यो सूचकांकमा १३८ देशमध्ये नेपाल १३५ औं स्थानमा छ । प्रविधिको प्रयोगमा पनि नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ । वैदेशिक सम्पत्तिको स्वामित्वका आधारमा १३३ औं स्थानमा छ ।
त्यसैगरी मजदुर र मालिकको समन्वयमा नेपाल १३४ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, नेपाल प्रतिव्यक्ति जलस्रोतका हिसाबले धनी देशको सूचीमा परे पनि गुणस्तरीय विद्युतको खपतका आधारमा भने १३२ औं स्थानमा छ ।
विश्वविद्यालय र औद्योगिक घरानाको सहकार्यमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोगमा २२१ औं स्थानमा छ भने पूर्वाधार विकास र प्रविधि अपनाउने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नेमा नेपाल १२६ औं स्थानमा छ ।
त्यसैगरी, गुड मार्केट प्राक्टिसमा ११६ औं, श्रम बजारको क्षमतामा १०३ औं स्थानमा, वित्तीय क्षेत्रको विकासमा ७३ औं स्थानमा, बजारको आकारमा ९३ औं स्थानमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बजारमा खुल्लापन घट्दो
प्रतिवेदनअनुसार विश्व बजारमा खुलापन घट्दो छ । खुलापन घटेका कारण अर्थतन्त्रहरुको वृद्धि र नयाँ प्रविधि र प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ । जसकारण नेताहरुले चाहाँदा चाहँदै पनि दिगो र समावेसी विकास कठिन बन्दै गएको मञ्चका संस्थापक एवं अध्यक्ष क्लाउस स्वाबले बताए ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र बजार प्रतिस्पर्धाका लागि अनिवार्य भएको तर प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुँदै गएको स्वाबको भनाइ छ ।
अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका नन ट्यारिफ व्यारियरहरु भन्सारमा कडाइ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैरनागरिकहरुको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको विषयमा लिइएको नीतिका कारण बजारमा खुल्लापन घटेको फोरमको ठहर छ । मौदि्रक नीतिमार्फत् मात्रै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने मञ्चको निश्कर्ष छ ।
यी हुन् नेपालमा लगानी गर्दा भोग्नुपर्ने कठिनाइ
प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्दा के कस्ता विषयमा के कस्ता कठिनाइ भोग्नुपर्छ भनेरसमेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अस्थिर सरकार, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, श्रमिक र मालिकको सम्बन्ध, करका दर तथा नीतिहरु लगायतका कारण नेपालमा व्यावसाय गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा व्यावसाय गर्न परेको अप्ठ्यारोमा २० अंकमा नेपालले १७.८ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, इनएडुकेट अफ इन्फ्रास्टक्चरमा १४.४ र भ्रष्टाचारमा १४.२ अंक प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा १०.९ अंक, नीतिगत अस्थिरतामा ८.९ अंक, वित्तीय पहुँचमा ४.९ अंक प्राप्त गरेको छ । मुुद्रास्पिmतिमा ४.३ प्रतिशत, ट्याक्स रेगुलेसनमा २.२ अंक, करको दरमा १.८ अंक जनताको कमजोर स्वास्थ्यमा ०.३ अंक र अपराध तथा चोरीमा ०.१ अंक प्राप्त गरेको छ ।
नेपालले पाएका यी अंकहरु हेर्दा नेपाल लगानीका लागि ठूलो अवसर भएको देश भएपनि लगानीका लागि वातावरण नभएको देश देखिएको डा. चित्रकारले बताए ।
9/28/2016 05:32:00 PM विश्व
इजरायल, असोज १२ गते । नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता ईजरायलका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री शिमोन पेरेजको बुधबार निधन भएको छ ।
दुई साता अघिदेखि सिकिस्त विरामी हुनुभएका पेरेजको ९३ वर्षको उमेरमा स्थानीय समयअनुसार विहान ०३ बजे निधन भएको पेरेजका छोरी–ज्वाइँ रफी वालडेनले जानकारी दिनुभयो ।
पेरेज दुई पटक प्रधानमन्त्री र एकचोटि राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो भने जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि सक्रिय राजनीतिज्ञकारुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्थ्यो ।
प्यालेस्टिनीसँंग शान्ति सम्झौता गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उहाँलाई सन् १९९४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो ।
उहाँको निधन प्रति विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले शान्तिका लागि सधैभरी प्रयत्न गरिरहने व्यक्तिका रुपमा उहाँलाई स्मरण गर्नुभएको छ । उहाँ पेरेजको अन्त्यष्टी कार्यक्रममा सहभागी हुनु शुक्रबार इजरायल जानुहुने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनले पनि शोक वक्तव्य प्रकाशित गरी शान्ति स्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका पेरेजको निधनले दुखित बनाएको बताउनु भएको छ ।
“विश्वमा पेरेजजस्ता सीमित मान्छे छन्, जस्ले विश्वलाई नै परिवर्तनको वहाक बनेर मानव इतिहासमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ । उहाँ हाम्रो शक्ति र नैतिकताका श्रोत पनि हुनुहुन्छ ।” ओवामाले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ ।
अमेरिकाकै पूर्वराष्ट्रपति विल क्लिनटनले पनि पेरेजलाई शान्ति र मेलमिलापका अभियान्तको रुपमा सम्झना गर्नुभएको छ ।
इजरायलकै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गहिरो शोक व्यक्त गर्नुभएको छ भने प्रतिपक्षी दलका नेता इस्साक हेर्जङले इजरायलको इतिहासका प्रतिक भएकाले कहिल्यै भुल्न नसक्ने बताउनु भएको छ ।
पेरेजले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रुपमा सन् २००७ देखि २०१४ सम्म इजरायलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । रासस÷एएफपी
काठमाडौंमा ११ वर्षीया बालिका बलात्कृत, बुबाका ‘साथी’ पक्राउ
9/28/2016 05:13:00 PM अपराध
काठमाडौं, असोज १२ गते। बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले नबिन भन्ने घनश्याम अर्याललाई प्रहरीले राजधानीको पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौ महानगरपालिका-३ बाँसबारी बस्ने खोटाङ घर भएका २६ वर्षीय अर्यालले सिन्धुपाल्चोक स्याउले-८ घर भई बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-५ पासीकोटस्थित खाली जग्गा भाडामा लिई छाप्रोमा परिवारसँग बस्दै आएकी ११ वर्षीया बालिकालाई पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेको बताइएको छ ।
बालिकाको बुवासँग ज्यामी काम गर्दै आएका अर्याल सोमबार बालिकालाई लिन विद्यालयमा गए पश्चात् शिक्षकहरुलाई शंका लागेको थियो ।
मंगलबार बालिकासँग सोधपुछ गर्दा अर्यालले आफुलाई पटकपटक करणी गरेको बताएकी छन् । फरार अर्याललाई भने प्रहरीले पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको छ ।-अनलाइनखबर